Nhau - Muzera re5G, pachave neshanduko huru mundima idzi
Muzera re5G, pachave neshanduko huru mundima idzi
Inofananidzwa neyakajairwa kutaurirana tekinoroji, 5G ine yakasimba kuita, zvimwe zviitiko uye nyowani ecology, iyo inogona kunyatso kusangana nezvinodiwa zvekushandisa zvechinyakare ekugadzira mabhizinesi easina waya network mukushandurwa kwehungwaru kugadzira, uye kutyaira ruzivo ruzivo, hunyanzvi hwekugadzira, hunyanzvi hwekushandisa uye hunyanzvi hwesimba nyowani yekupinda zvakanyanya munzvimbo dzese dzekugadzira zvemagetsi, zvichikonzera shanduko huru yesainzi muindasitiri. Semuenzaniso, nerutsigiro rwe5G network nekukurumidza kumhanya, kunonoka kudzikira, kugona kwakakura uye kuvimbika kwakakwirira, kunyorera-kumucheto kunyorera mumunda wekuyedza zvemagetsi uye kuyera, senge millimeter wave, yakakura-chikamu MIMO uye adaptive beamforming, vari inotarisirwa kuve yechokwadi, izvo pasina mubvunzo zvinoda kunatsiridza zvakanyanya kurongeka uye kugona kwekuyedza kwemagetsi uye kuyera.
Muminda yemota, nharembozha, zvishandiso zvekumba, zvishandiso zvinopfeka, michina yekumaindasitiri nemidziyo yeinjiniya, 5G tekinoroji kunyorera kwakazara uye kwakadzika. Mune yakakosha maindasitiri cheni yekutaurirana chip, yekutaurirana module, antenna, radio frequency, nezvimwewo inotsigirwa ne5G tekinoroji, 5G tekinoroji ichaunza hutsva hutsva kune aya maindasitiri ekugadzira minda. Semuenzaniso, muSMT indasitiri, ichibatsirwa nekuwedzera kudiwa kwe5g tekinoroji yeakakwira-frequency uye epamusoro-kumhanyisa zvinhu, PCB yave kuda kuunza mamiriro akanaka ekukwira vhoriyamu nemutengo; kushandiswa kwe5G base station uye 5G nhare mbozha, kusanganisira zvemagetsi zvemagetsi, ichaunza yakakura kutakura, yakawanda frequency band, yepamusoro frequency band uye humwe hunyanzvi, kuitira kuti R & D yezvinhu zvekutaurirana pakati peRF kumberi-kumagumo kanyanga uye baseband chip icha kukura nekukurumidza; uye yemagetsi chikamu chinotsigirwa ne5G Kugadzira kunogona kuita kuti kugadzirwa kwacho kuve kwakaringana, kwakasiyana-siyana uye kwakaderera kushandiswa, uye maindasitiri senge akangwara kupfeka uye kugadzira kwemaindasitiri kunounza mabhenefiti akakosha. Zvinogona kuonekwa kuti 5G iri kushandisa zvayakanakira zvisingaenzaniswi kugonesa indasitiri yekugadzira zvemagetsi kuti irambe ichiita mushe mushe muzviitiko zvakasiyana, izvo zvinobatsira indasitiri yekugadzira zvemagetsi kuvandudza mamiriro evashandi, kudzora kupindira kwemanyorerwo emitsetse yekugadzira, uye zvakanyanya kunatsiridza kudzora kwemaitiro ekugadzira.
Kugadzira njere kwakagadzirira kuvhura 5G indasitiri yekutsigira kune iyo yekukurumidza nzira
Pamusoro peiyo indasitiri yekugadzira yemagetsi, 5G inogona kuzadzikisa zvakakwana zvido zvekubatana kwemidziyo uye zvinoshandiswa zviri kure zvinoshanda munzvimbo yemabhizimusi. Iyo yakangwara yekugadzira munda inomiririrwa neInternet yezvinhu, maindasitiri otomatiki kudzora, gore robhoti, nezvimwe zvichavhura nguva nyowani yekubatana kukuru kwezvose uye kwakadzika kwevanhu-komputa kudyidzana pamberi pamwe nerutsigiro rwe5G tekinoroji.
Seyakakosha yekutsigira tekinoroji yekubatanidza vanhu, michina nemidziyo, iyo Internet yezvinhu uye 5G tekinoroji inoumba hukama hwehukama. Iko kushandiswa kweInternet yezvinhu kunotsamira pa5G kuti ipe akasiyana mamiriro easina waya ekubatanidza mhinduro, uye kukura kwe5G tekinoroji zviyero zvinodawo kukurudzira uye kusimudzira kweInternet yezvinhu. Otomatiki kudzora ndiyo inonyanya kukosha application mune yakangwara kugadzira chirimwa. Iyo yepakati sisitimu inoda yakakwira-chaiyo, yakaderera kunonoka uye yakakwirira yakavimbika system kutaurirana. Chete 5G inoita iyo yakavharika-loop control application inogoneka kuburikidza neasina waya network kubatana.
Zvinotoshamisa kuti panguva imwechete yeNepcon China, ichaitwa musi waApril 24-26, fekitori ine hungwaru uye otomatiki tekinoroji yekuratidzira ichatanga iyo "smart kugadzira DreamWorks" yekugadzira line 2.0, inova yakanaka nzira yekugadzira kuratidza zvizere simba kugadzirwa kwemaitiro ekubatanidza kwekugadzira tambo michina. Pedzisa yakarongedzwa yemagetsi chigadzirwa gungano odha kubva kune izere zvemagetsi chigadzirwa kugadzirwa kwemaitiro pane-saiti chaiyo-nguva yekuraira kuiswa, chikamu chinomisikidza, gungano regobvu uye otomatiki kuyedzwa.
Muchikamu chekushambadzira, kubva kune yekuchengetera matura kusvika kune yekuparadzirwa kwekushambadzira, isu tinoda kufukidzwa kwakakura, kufukidza kwakadzika, kushomeka kwesimba simba, kubatanidza kukuru, yakaderera-mutengo kubatanidza tekinoroji uye kufukidzwa kwenetiweki, uye 5G network inogona kusangana nezvinodiwa zvakadaro zvakanaka. Mune akangwara ekugadzira ekugadzira mamiriro, zvinowanzo fanirwa kuti robhoti ive nesangano pamwe nekudyidzana kugona kusangana neyakagadziriswa kugadzirwa, izvo zvinounza iro robhoti kudiwa kwegore. 5g tekinoroji inofambisa huwandu hukuru hwemakomputa mashandiro uye mabasa ekuchengetedza dhata kune iro gore, iro rinogona kudzikisira zvakanyanya mutengo uye simba rekushandisa robhoti Hardware, uye zvakadzama zvinosangana nezvinodiwa zvekusanduka kugadzira.
Kutaura chokwadi, 5G tekinoroji ichave kiyi yekutsigira shanduko yeIntelligent Kugadzira mune ramangwana. Izvo hazvigone chete kushandisa akawanda mamiriro kuti ubatanidze zvakapararira uye zvakapararira vanhu, michina nemidziyo, uye kuvaka yakabatana Internet, asi zvakare inotsigira iyo nharembozha Internet application neicho chaicho-nguva uye yakakwirira kuvimbika kubatsira ekugadzira mabhizinesi kubvisa nyonganiso dze yapfuura isina waya netiweki tekinoroji, iyo ichave nemhedzisiro yakanaka mukuitwa kweindasitiri Internet uye kudzamisa shanduko yehungwaru hwekugadzira Kukosha.
Kubva kuvhurwa kweBoao Forum yeAsia muna Kubvumbi 2018 kusvika mukubata musangano wepakati wekushanda kwehupfumi mukupera kwegore, 5G haina kushamisika kuve izwi rakakosha regore mumunda wezvehupfumi. Sechizvarwa chitsva chemagetsi ekutaurirana tekinoroji, 5G ine kanokwana kagumi kukwirisa kumhanya kwe4G, millisecond level kutapudza kutapudza uye zana bhirioni rezinga rekubatanidza kugona. Pasi pekuvakwa kwayo, hupfumi hwedigital hunovhara pamhepo uye pasiri pamhepo, kushandiswa uye kugadzirwa, chikuva uye ecology ichawana simba rekutyaira rakakura. Kunyanya iyo indasitiri yekugadzira indasitiri, inoonekwa se "yakaoma musimboti" yehupfumi hwenyika, iri munguva yakaoma yekushandurwa nekusimudzira. Inoda imwe nyowani nyowani tekinoroji inomiririrwa ne5G kuitira kuti iwane denderedzwa nyowani yekukura kutenderera uye kukura kwekukura, uye kuunza shanduko huru kune yekugadzira modhi uye yekuvandudza mamiriro.
Isu tinopa imwe-yekumira SMT mhinduro kune vagadziri ve5G zvigadzirwa, Siemens mounter, Fuji mounter, Panasonic mounter, Samsung mounter uye SMT peripheral michina, tinogamuchira kubvunza!
Post nguva: Nov-01-2020